एक छाक खाने ख`र्च छैन, अनलाईनबाट कसरी पढौ सरकार ?? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/एक छाक खाने ख`र्च छैन, अनलाईनबाट कसरी पढौ सरकार ??
सविता थापा, मैले न त विरोध गर्न खोजे न त आलोचना, ग्रामीण क्षेत्रका बि`ध्यार्थीहरुमा परेको प्रभाव र मज`दुरलाई राहतको व्यव`स्थालाई लक्षित गर्दै उल्लेख मात्र गरेकी हुँ । क्षमा`प्रार्थी छु सरकार, गरीब मजदुरका छोरा छोरीहरुले अनलाईन बाट पढ्न संभव होला र भनेर सुनाउन मात्र खोजेकी हुँ ।
आँखामा भविष्यका सपना र साथमा नोकिया मोबाइल फोन बोकी उच्च शिक्षा अध्ययनको लागी सहर पुगेको उ माहामारीको बेला पुनः गाउँ पुगेका छ। न त उ सँग नेट चल्नि फोन छ न त उ सँग आर्थिक।एकछाक खान धौधौ परेको बेला हामी मज्दुर तथा ग्रामीण क्षेत्रका बिध्यार्थी कसरी अन्लाईन कक्षामा सहभागि हुने ? न त सरकारले निःशुल्क डाटा दियो न त राहत। महलमा बसेर कडा नियमको पहल नगर यो अमेरिका होइन।
तिमीले गरेको ठुला भाषण र भला`द्मी पाराले देशमा कति र के विकास गरेको रहेछौ एकिन होस्। असी करोडको राहत क`कस्लाइ दियौ ? आज पनि जनता त्यहि राहतको आसमा सडकमा लडिरहेका छन्। देशमा सं`कटकालीन अबस्था छ तिमी एउटा कुर्सी`मा लडीहेको छौ । तिमीलाई यो देश र जनताको चिन्ता होइन तिमीलाई तिम्रो कुर्सीको चिन्ता छ ।
धिक्कार छ मेरो देशको शासकलाई तिमी सुरक्षित आफै छैनौं, जनतालाई कसरि सुरक्षा दिन्छौं ?यो गाउँ हो सरकार, कुनै सेवा सुविधाले सम्पन्न भएको राजधानी सहर होइन।
नेट्वो`र्क टिप्न डाँडामा पुग्नु पर्ने किताब बोकेर काता जाउँ ? नपढौं भबिष्यको चिन्ता छ , पढौं आमालाई औषधि कि न्न पैसा हुदैन। फोनमा व्यालेन्स राखेर पढौं की आमालाई औषधी किन्न जाउ, सरकार ?लेखिका सामाजिक अभियन्ता हुन ।ठेगाना: रिब्दीकोट ७ बतासे पाल्पा ।